I-iPad entsha eyenziwe ngokutsha emva kwehlobo | IPhone iindaba
ULuis Padilla | | iPad, Izaziso
UMark Gurman ukhuphe uqikelelo lwakhe malunga nokukhutshwa kweApple okuzayo kunye abalinganiswa abaphambili yi-mini mini ye-iPad kunye ne-iMac entsha eneprosesa ye-Apple Silicon kunye nesayizi enkulu yescreen.
I-mini mini ye-iPad ibonakala ngathi ilibalekile iApple, ngaphandle kotshintsho olukhulu kuyilo ukusukela oko yaqalwa. Kakhulu kangangokuba abaninzi bade baqwalasele ukuba yitafilethi ekufutshane ukuba inyamalale, kunye nokonyuka kobungakanani be-iPhone. Nangona kunjalo, izicwangciso zika-Apple azibonakali ngathi ziyahamba phaya, kwaye ngokukaGurman usixelela kwincwadana yakhe yokugqibela ukuba ukuwa sinokuba nethebhulethi entsha encinci enoyilo olufana ncam nolo lwe-iPad Air. Ukusukela ngo-2019 asinayo imodeli entsha ye-iPad, kwaye Le 2021 sinokubona ithebhulethi entsha enoyilo olufana nolo lwe-iPad Air, enezakhelo ezimbalwa kwaye akukho qhosha lasekhaya, kubandakanya ne-ID yesazisi. Kwiqhosha lamandla kunye nokunyuka okulandelayo kwiscreen ngaphandle kokuchaphazela ubungakanani besixhobo sonke, ukufikelela kwi-8,4 ″. Iprosesa ebandakanyiweyo iya kuba yi-A14, efanayo naleyo ibandakanya i-iPhone 12, kwaye iya kuba nesinxibelelanisi se-USB-C.
Kwakhona iMac, eyona khompyuter ye-Apple yeyona iconic, iya kuba neendaba, nangona kule meko singacwangcisanga imihla yokuqaliswa. U-Apple uvuselele ikhompyuter kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ngemibala emitsha kunye neprosesa ye-M1, ukongeza kuyilo olucwangcisiweyo olufana nePro Display XDR yesikrini. Kodwa ichaphazele kuphela iMac yakhe "encinci", ehamba ukusuka kwii-intshi ezingama-21 ukuya kwii-intshi ezingama-24. Ukuhlaziywa kwe-iMac 27 intshi kuya kubakho kamva, kuyilo olufanayo, ukwanda kwesayizi yescreen (i-intshi ezingama-30?) Kwaye iprosesa entsha ye-Apple Silicon, ngokuqinisekileyo ayisiyi-M1 kodwa yindlalifa yayo, ebizwa ngokuba yi-M2. Mhlawumbi iya kuba yikhompyuter yokuqala ukukhupha ezi processor zintsha, isizukulwane esitsha seApple Silicon eqinisekisa abasebenzisi kunye nabagxeki ngokusebenza okungaphaya kokuthandabuza kunye nokusebenza kwamandla okumbalwa abanethemba lokuthelekiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » I-iPad mini entsha yenzelwe emva kwehlobo
I-Apple ibalaselisa unxibelelwano phakathi kwe-iPhone kunye ne-Apple Watch kwintengiso yayo entsha